६ वटा औंला किन हुन्छ ? ज्योतिष शास्त्र र वैज्ञानिक भाषामा यस्तो छ भिन्नता
Posted on January 14, 2019 by J NP
साधारण मानिसलाइ देख्दा खासै अनौठो लाग्दैन तर साधारण मानिस भन्दा अलिक फरक मानिस देखियो नजर तानिन्छ । त्यस्तै मानिसको शरीर अन्यको भन्दा फरक भयो भने जसले पनि एक पटक नजर लगाउछ । के तपाईले कसैको हात अथवा खुट्टामा छ वटा औंला देख्नु भएको भएको छ ? तर यो कुनै नौलो कुरा भने होइन ।
कसैले यसलाई राम्रो भन्ने गरेका छन् त कसैले ६ वटा औला हुनु नराम्रो तरिकाले पनि व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्छन। तर,हातमा छ वटा औंला हुनेहरुलाई ज्योतिष शास्त्रमा भाग्यमानी मानिने गरिन्छ। समुन्द्र शास्त्रमा हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न चिन्हहरुलाई आधार बनाएर एक व्यक्तिको स्वभाव साथै भविष्य बताउने गरिन्छ।
वैज्ञानिक भाषामा हात अथवा खुट्टामा ६ वटा आउनल हुनुलाई अनुवांशिक विकार मान्ने गरिन्छ। अनुवांशिक विकार मध्य पनि यस्तो समस्या भएका व्यक्तिलाई पोलीडैक्टली भएको भन्ने गरिन्छ। मानव शरीरमा हुने डीएनएको मात्र धेर या थोर भएमा यस्तो समस्या देखा पर्ने चिकित्सकहरु बताउने गर्छन्। यस प्रकारको समस्या अफ्रीका तिर धेरै हुने तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांक अनुसार हरेक ५०० बच्चा मध्यमा एक को हात अथवा खुट्टामा ६ वटा औंला हुने गर्छ। अझ आश्चर्य लाग्ने कुरा के रहेको छ भने यस प्रकारको समस्या जनावरहरुमा पनि देखिने गर्छ।
तर यता ज्योतिष शास्त्रमा भने छ वटा औंला हुने व्यक्तिहरुलाई धेरै भाग्यमानीको मान्ने गरिन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार यदि एक व्यक्तिको हातमा १० भन्दा धेरै औंला भएमा यस्ता व्यक्तिहरु आर्थिक मामलामा धेरैनै अगाडी रहने बताईएको छ। साथै यस्ता व्यक्तिहरु हरेक कार्यमा इमान्दार रहने पनि ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकारका मानिसहरु आलोचना गर्न पनि धेरैनै खप्पिस रहेन गर्छन्। आफ्नो हरेक कार्य मिहिनेत साथै इमान्दारिताका साथ गर्ने क्षमता राख्ने यस प्रकारका मानिसहरुलाई काममा ढिला-सुस्ती गरेको मन नपर्ने गर्छ। इतिहासलाई मान्ने हो भने मध्यकालीन युगमा छवटा औंला हुनेहरुलाई जादू,टोना-मोनासंग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो।